my kitchen my life: ကျွန်တော်နှင့်microwave cooking
အဓိက ကတော့ reheating လုပ်တဲ့နေရာမှာ တော်တော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုးရှိသလို ဆိုးကျိုးလည်းရှိပါတယ်။မသုံးတတ်ရင် အစားအစာတွေအားလုံး သွန်ပစ်ရတတ်တယ်။း) ကျွန်တော် ဖြစ်ဖူးလို့ပြောတာ။ ဟီး frozen fish ကို ကျွန်တော် က အရည်ပြော် thawing အောင်လို့ဆိုပြီး5mins မီးနစ် ပစ်ထည့်လိုက်တာ ဘာပြောကောင်းမလဲ တခါတည်းကို ကျက်သွားတာပဲ။ သူကျက်သွားတဲ့ ပုံစံက မလှဘူးလေ။ အရောင်မတတ်ဘူး။ စားချင့်စဖွယ်မရှိဘူး။
Basic microwave ovens heat food quickly and efficiently.တဲ့ ဟုတ်တယ်မြန်တာတော့ ပြောမနေနဲ့ ။ ဟီးပျင်းတဲ့ chef တွေဆို Grill ပေါ် အရောင်လေးရအောင်ကင်ပြီး fry ကြော်ပြီး ရင် microwave လုပ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ executive chef တွေ့ရင်တော့ အသေပဲဗျို့။ နောက် နွားနို့ milk ပူပူလေးသောက်ချင်လား ၊ ရတယ်ဗျာ။း) melt butter လုပ်ရင်လည်းဒီကောင်လေးနဲ့သုံး ။
သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ defrosing frozen လုပ်လို့ရတာပါပဲ။
ဘယ်လောက်ခဲနေတဲ့ အသားဖြစ်ဖြစ် ပေါ့... သူနဲ့သာ defrosing လုပ်လိုက်။ အသားပျော့ပျော့လေး ထွက်လာမယ်။ The microwave oven is now an essential part of most kitchens.Microwaves can pass through plastic, paper, wood and glass but not through metals. Never microwave the dishes covered in Alluminium foil or any metallic material . It may generate sparks.For reheating set the time for 1 min.
ကဲ cooking method ပြီးပါပြီ။
Posted by leo mark at 5:43 PM
ဦးရွှေရိုး December 24, 2012 at 3:26 AM